LALAO RAVALOMANANA : HIADY HO AN’NY MARINA ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
LALAO RAVALOMANANA : HIADY HO AN’NY MARINA ISIKA
Feno fisaorana an’Andriamanitra isika hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana androany Sabotsy 11 Janoary 2014 teny amin’ny Magro Behoririka mahatsiaro fa androany no nomeny hahazoantsika mifampiarahaba tratry ny taona, arahabaina trary ny taona e ! Raha ny rariny sy hitsiny hoy izy dia tokony hifaly havanja isika nahazo izany tombon’andro izany kanefa tsy afaka hanao izany noho ny zavamisy eto amin’ny firenena ; miara miombona alahelo amin’ny namantsika satria hoy ny tenin’ny soratra masina hoe ; miaraha ory amin’izay ory. Ny zavatra nitranga eto amin’ny firenena amin’nympiarabelona amintsika, amin’ny maha reny ny tena dia manohina ny fo, ary mahatsiaro honena ny fo satria ny zanaka malagasy no vonina, tsy ekena izany. Matoa hoy izy ny ankizy mihetsika dia hitany fa msiy zavatra tsy mety ao. Ny ray amadreny marina dia tokony hihaino izay lazain’ny zanaka. Ireo mantsy no ho avin’ny firenena, ireo tanora ireo no volavolaina ahazoana taranaka vanona. Izany indrindra no hahatongavana eto hoy izy tsy afaka mangina ny tena ary honena ny fon-dreny satria zanaka no sakanana tsy avela hiteny, ny zanaka no tokony henoina, ny zanaka no tokony hovolavolaina ho tonga olombanonana hahafahana manangana firenena vanona. Tsy ho lava resaka aho hoy Neny fa tsy mety ny foko raha tsy miteny ary misy fotoana hanginana ary misy fotoana hitenenana. Ankehitriny kosa hoy izy rehefa misy tsy misy loatra ny rariny dia tsy hanaiky izany isika vahoaka fa tsy maintsy mitady ny marina. Tsy menatra isika satria ny marina no jerentsika, tsy maintsy mijoro isika satria miady amin’ny marina. Androany aho hoy izy tsy ho lava teny fa mbola be ny sisa fa amin’ny maha fon-dreny ahy dia honena loatra mahita ny zavamitranga natao amin’ny zanantsika. Rehefa ny zanaka Malagasy ve hoy Neny no mitakay ny rariny sy hitsiny tonga dia vonina. Ny asan’ny mpitandro ny filaminanana araka izany teny izany dia tokony hitandro ny filaminana ho an’ny firenena , ho an’ny vahoaka Malagasy ka tsy hamelantsika ny marina fa hiady ho an’izany isika. Misaotra antsika amin’ny fahendrena nasehontsika teo , ny amin’ny firaisankinantsika Malagasy. Ho asehontsika fa olombanonana isika ary averintska ny fampihavanam-pirenena ary indrindra isika reny hitrotro am-bavaka ny zavamisy eto amin’ny firenena, fa ny vavaka no manova zavatra. Aza matahotra isika mianakavy fa minoa fotsiny ihany.
Lalao Ravalomanana : « Hiaraka isika hanorina firenena vanona, hiara-hiasa isika hanangana ny rava »
MIEZAHA ISIKA HAMETRAKA FITOKISANA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA
Lalao Ravalomanana tany amin’ny Toby Kristy Manafaka Ibora : Mila firaisankina isika sy afaka miara miasa ary mivavaka
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 janvier 2014 11 janvier 2014 Catégories Politique
2 pensées sur “LALAO RAVALOMANANA : HIADY HO AN’NY MARINA ISIKA”
Mueller Rakotoniaina Françoise dit :
12 janvier 2014 à 2 h 12 min
Madagasikara est le pays de mon coeur, je désire par-dessus tout que chacun y mange à sa faim, aie un toit, des vêtements, l’école pour tous les enfants, des dispensaires et des médicaments. Marre de tous les profiteurs qui volent mon peuple. Justice pour Dago
13 janvier 2014 à 4 h 41 min
Ary Neny zany tena mafatifaty aaa,mankasitraka amin’ny fandraisana andraikitra eee
Précédent Article précédent : RAVATOMANGA ROLAND : AZA MANAO KOLIKOLY IANAREO CES
Suivant Article suivant : DR ROBINSON : MANGATAKA NY HANISANA NY VATO IZAHAY FA RAHA TSY IZANY SOKAFANAY NY VAVAHADY